Governemanta Malagasy:NANOME TANANA KOA I ALEMANA -
AccueilRaharaham-pirenenaGovernemanta Malagasy:NANOME TANANA KOA I ALEMANA
Haharitra roa andro ny dinika teo amin’ny governemanta Malagasy izay notarihin’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ny governemanta Alemana izay nisoloan’ny ambasadaoro Harald Gehrig tena izay natao teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo. Fihaonana ho fanamafisana ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo amin’ny roa tonta manodidina ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Nivoitra nandritra ny andro voalohany omaly àry ny fahavononan’ny minisitera federalin’i Alemana momba ny fampandrosoana (BMZ) sy ny banky alemana misahana ny fampandrosoana (KFW) hanampy ara-teknika sy ara-bola ny governemanta malagasy mba hisian’ny fampandrosoana haingana sady maharitra.
Sehatra maro no voakasika amin’ity fiaraha-miasa eo amin’ny governemanta malagasy sy alemana ity dia ny fambolena, ny angovo, ny fiarovana ny harena voajanahary ary ny fanamorana ny fitsinjaram-pahefana mba hivoahan’ny firenena haingana amin’izao fahasahiranana mahazo azy izao vokatry ny krizy. Naneho ny fahavononany hanome tanana ny fitondram-panjakana ny governemanta Alemana ary niarahaba ihany koa noho ny fahombiazan’ny fihaonan’ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena natao tany Parisy farany teo. Nambaran’ity ambasadaoro alemana ity àry fa midera ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana amin’ny fametrahana ny mangarahara ho tanjona sy fepetra amin’ny fanatanterahana ny PND ny tenany.
Nasian’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier tsindrim-peo kosa ny tarigetran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia ny fametrahana tetikasa miantefa mivantana any amin’ireo vahoaka sahirana mba ahatonga azy ireo hahaleotena. Noraisin’ny ambasadaoro Alemana, Harald Gehrig, ho isan’ny laharam-pahamehana avy hatrany izany hafatry ny filoha izany koa nambarany ny fiverenan’ireo teratany alemana miasa an-tsitra-po izay naato noho ny krizy 2009, hojerena ihany koa ireo tetikasa madinika tafiditra ao anatin’ireo tetikasa goavana alemana azo tanterahana avy hatrany hanampiana ireo mpiray Tanindrazana any Atsimo.